“Tsapao aloha ny herinareo…” | NewsMada
“Tsapao aloha ny herinareo…”
Par Taratra sur 26/01/2017
Tadidintsika ve? Teny nalaza, nivoaka ny vavan’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc izany, fotoana fohy monja nialohan’ny nialany teo amin’ny fitondrana…” Tsapao aloha ny herinareo…”, hoy izy. Nampihetsika hambom-po ireo mpanohitra izay efa nanao fihetsiketsehana izany. Nanome hery ireo mpanohana azy ihany koa anefa, ka nampihenjan-droa ny tady.
Amin’izao fotoana izao, indrindra manoloana ny zava-misy nisesy tato ato, sao mba tokony haverina indray izay fehezanteny izay? Fambara ratsy ny fisesin’ny fitsaram-bahoaka, ho an’ny fitondrana iray. Tsy fahatokisana ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro filaminana, ka ahina hatrany hirona amin’ny hetsi-bahoaka.
Anisan’ny vaovao nivoitra amin’ny fandalovan’ny delegasiona tiorka eto Madagasikara ny hoe hanome traikefa ny tafika malagasy ny tafika tiorka. Hiofana ho mahery fihetsika kokoa, sa haka traikefa amin’ny fanonganam-panjakana, izay nandraisan’ireo miaramila tiorka anjara? Enga anie ka ho an’ny fitandroana ny fandriampahalemana amin’ny ankapobeny, anatiny sy ivelany izany. Ny tafika no tompon’ny hery, fa tsy ny hery no tompon’ny tafika. Miaro ny vahoaka izy fa tsy sanatria miady aminy.
Vaovao nanaitra hafa koa, miady ny rambony amin’ny filaharan’ireo firenena anjakan’ny kolikoly i Madagasikara. Tsy tena nanaitra aloha raha ny tena marina, fa mampalahelo ny maro fotsiny. Iainana andavanandro tsinona izany. Raha ny ady amin’ny kolikoly no hitsapana ny hery, tena marefo dia marefo isika.
Fa aleo mitsapa hery ihany, sitrany ahay mahafantatra ny sokajy tokony hisy ny tena. Misy hanarenana izay tsy mety, misy hiomanana amin’izay ady miandry. Mba fantatra mialoha ny fahavalo tsy ho resy, ny azo hatosika ary ny mety ho lavo. Ho resy ve? Ho voatosika? Miankina amin’ny hery sy ny paikady ho enti-miatrika azy. Tsy mila manantena hery vaovao fa izay hananana no enti-miatrika.